REPUBLICADAINIK | कांग्रेसको योजनामा बनेको राप्ती पुलमा पूर्वएमालेको चुरीफुरी धेरै - REPUBLICADAINIK
लमही । दाङको देउखुरीस्थित सिसहनियाँ–महदेवा जोड्ने पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
पुललाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माघ १२ गते उद्घाटन गर्ने तयारी गरेका छन् । पुलको उद्घाटनलाई लिएर पूर्वएमालेहरूले चुरीफुरी देखाएका छन् । पूर्वएमालेहरूको चुरीफुरीलाई लिएर देउखुरीदेखि काठमाडौंसम्म हलचल ल्याइदिएको छ ।
पुलको उद्घाटनमा नेपाली कांग्रेसलाई बोलाउने वा नबोलाउने भन्ने विषयमा केही भनिएको छैन ।
पुलको जन्मादाता राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलसहितका कांग्रेस नेताहरूलाई पनि उद्घाटनका विषयमा सुइको समेत दिइएको छैन ।
तत्कालीन पूर्वसांसद योगेन्द्र चौधरी, सुशीला चौधरीलाई पनि कुनै जानकारी दिइएको छैन । त्यो पुलका लागि बजेट पार्न योगेन्द्र र सुशीलाको ठूलो भूमिका र योगदान छ ।
२०७३ साल मंसिर २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुलको शिलान्यास गर्ने बेला एमालेले देउखुरी उपत्यका बन्द आह्वान गरेर अबरोध सिर्जना गरेको थियो ।
अहिले पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्वएमालेहरू उद्घाटन गर्न चुरीफुरी गरिरहेका छन् । जस लिन होडबाजी गरिरहेका छन् ।
नेकपा विभाजन भएका बेला पूर्वएमाले अर्थात ओली समूहले पुललाई देखाएर दाङ र देउखुरीमा राजनीति गर्न खोजेको छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले पुल शिलान्यास हुँदा पूर्वएमालेले गरेको हर्कतलाई सम्झाइदिएका छन् । कांग्रेस नेता चौधरीले तत्कालीन एमालेले पुलको शिलान्यास बिथोल्न देउखुरी उपत्यका बन्द गरेको स्मरण गराइदिएका हुन् ।
पुलको उद्घाटनलाई लिएर पूर्वएमालेकी नेतृ शान्ता चौधरी, लुम्बिनी प्रदेशका सांसद रेवतीरमण शर्मालगायतका नेताहरूको चुरीफुरी बढेको छ । यो पुलमा शान्ता र रेवती खासै योगदान छैन भन्नेहरू नेकपाकै नेताहरूको भनाइ छ । बरु पुलमा तत्कालीन सांसद गंगा चौधरीको धेरै योगदान छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल हेलिकप्टरमार्फत आएर पुलको शिलान्यास गरेका थिए । पुलको शिलान्यास गर्न नदिन एमालेले देउखुरी उपत्यका बन्द आह्वान गरेको थियो ।
एमालेले बन्द आह्वान गरेर ठाउँ–ठाउँमा अबरोध सिर्जना गरेपछि दाङ क्षेत्र नं. १ का सभापति भेषराज पाण्डे पुल शिलान्यास कार्यक्रममा जान पाएका थिएनन् ।
पुल शिलान्यास कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालका साथै कांग्रेस नेता एवम् तत्कालीन सिचाइँमन्त्री दीपक गिरी, कांग्रेस नेता एवम् तत्कालीन सांसद योगेन्द्र चौधरी, तत्कालीन सांसद गंगा चौधरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
राप्ती गाउँपालिकाको सिसहनियाँ र गढवा गाउँपालिकको महदेवा जोड्ने पुल नेपालकै दोस्रो लामो पुल मानिन्छ । यो पुल ८६० मिटर लम्बाई र साढे १० मिटर चौडाइ रहेको छ ।
के भन्छन् पुलको जन्मदाता डा.पोखरेल ?
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यस बेला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा.पोखर थिए । प्यूठान जिल्ला स्थायी घर भएपनि दाङको विकासका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न योजनाहरू उनले राखेका थिए । देउखुरी उपत्यकाको विकास, पर्यटन र राप्ती नदीको कटान रोक्न विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारेको उनले बताए ।
पुलको लागि बजेट तत्कालीन भौतिक मन्त्रीद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदारको ठूलो योगदान छ । निधि र गच्छदारले बजेट छुट्याइदिएको डा.पोखरेलले बताए । त्यस बेला सत्बरिया नजिकै राप्ती पुलमा पनि अर्को योजना पारिएको उनले बताए ।
डा.पोखरेलले देउखुरी उपत्यकमा रिङ्रोड बनाउने योजना अगाडि सारेको बताए । राप्ती नदीमा पुलहरू निर्माण गरेपछि तटबन्द स्वतः हुन्छ भनेर देउखुरीका सांसदहरूलाई बोलाएर निवेदन दिन आग्रह गरेको उनले बताएका छन् । त्यस बेलाका सांसदहरू योगेन्द्र चौधरी, सुशीला चौधरी, गंगा चौधरी र रश्मीराज नेपालीलाई बोलाएर योजनाहरू दिन अनुरोध गरेपछि उनीहरूले साथ दिएको डा.पोखरेलले बताएका छन् । पुल बनाउन पूर्वएमालेहरूको खासै योगदान नरहेको डा.पोखरेलले बताएका छन् ।
डा.पोखरेलले त्यही बेला लमही–घोराही–तुलसीपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्म चार लेनको बाटोको योजना राखेका थिए । भालुबाङदेखि बाग्दुला, भीमफेदी हुँदै मुस्ताङ जोड्ने डबल लेनको योजना पनि डा.पोखरेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा राखेको बताए ।
देउखुरीमा एयरपोर्टको योजना पनि आफूले राखेको उनले बताए । देउखुरीमा एयरपोर्ट बन्दा रोल्पा, रुकुम, प्यूठान, अर्घाखाँची, सल्यानलाई पायक पर्छ भनेर आफूले योजना राखिएको डा.पोखरेलले बताएका छन् । सुरइ नाकाको खोलामा ड्याम बनाएर पानी जम्मा गर्ने पनि उनकै प्रस्ताव थियो ।
त्यो योजनालाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यस पटक बजेट राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको उनले बताए । ड्याम बनाएर वर्षातको पानी जम्मा गरेर जलासय बनाइ कपिलवस्तुमा सिचाइँको योजना बनाउन डा.पोखरेलले नै सुझाव दिएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि सुरइ नाकाको खोलामा जलासय ड्याम बनाउनेबारेमा डा.पोखरेलसँग सल्लाह र सुझाव पनि लिएको उनले बताएका छन् ।
Published : Tuesday, 2021 January 19, 8:39 pm
ओलीलाई हटाइदिन आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले कांग्रेससँग गुहार मागे
पूर्वआईजीपी खनाल ‘कालो’ कम्युनिस्ट बन्ने, ओलीले पठाए नयाँ ‘सांसद’को प्रस्ताव
झ्यालबाट छिरेको आरोप लागेका यी भीआईपी कम्युनिस्टले रंग फेरे
देउवा–प्रचण्डबीच सम्वाद, नयाँ सरकारबारे कुराकानी
तीन वर्षदेखि कांग्रेसले पाएको शक्तिशाली पद खोसियो, एक तह घटुवा !
सर्वोच्चको फैसलाबारे के भन्छन् सभापति देउवा ?